नेपाल आज | सरकार गलत बाटोमा, नाम समृद्धिको काम विवादै विवाद (भिडियोसहित)
सरकार गलत बाटोमा, नाम समृद्धिको काम विवादै विवाद (भिडियोसहित)
सोमबार, २७ फागुन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मणि थापाले नेपाल आजसंगको भेटमा भने, ‘ युनिभर्सल पिस फेडरेशनको कार्यक्रमले के दियो ? भेनेजुएला प्रकरणबाट के मिल्यो ? सीके राउतलाई यत्रो महत्व किन ? ’
उनले अघि भने, ‘ भन्ने बेला विकास र समृद्धि, काम चाहिं विवादै विवाद ? ’
पक्कै पनि विकास र समृद्धि यो सरकारको प्राथमिकता हो भने गतिविधि पनि यस्तै हुनुपर्यो । नेता थापाका अनुसार यो समय भनेको नेताहरु देश बिदेश घुम्ने, ठूलाठूला सभा सम्मेलन गर्ने, कसैलाई पार्टीमा भित्र्याउने, टीका लगाउने, राजनीतिक समीकरण बनाउने फुटाउने, अन्य दल र नेताका बिषयमा टीका टीप्पणी गर्ने होइन । दृढ निश्चित भएर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनमा लाग्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भैरहेको छैन ।
सरकारले बिखण्डनको राजनीति गरिरहेका राउतलाई अनावश्यक महत्व दिएर उचालेकोमा थापाको असन्तुष्टि छ । थुनामा रहेका राउतका बिषयमा मौन बसिरहेको भए केही समयपछि उनी आफै बाध्य भएर राजनीतिको मुल प्रवाहमा आउने थापा बताउँछन् । तर, रातारात एकाएक पार्टीमा समेत छलफल नगरी हठातपूर्वक सीकेलाई जुन स्थान दिइयो यसले मुलुकमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सृजना गर्ने उनको आशंका छ ।
सीके राउत पहिले पनि अखण्ड राष्ट्रको पक्षमा नभएको र अहिले पनि ११ बुँदे सहमतिपछि पनि इमान्दार नदेखिएकाले उनलाई सरकारले अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै किन उनको बचाउमा लागेका छन् भन्ने कुरा आफ्ना लागि आश्चार्यको बिषय भएको उनी बताउँछन् ।
सरकार र नेकपा नेताहरु आफनो मुलुक र राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय गर्न स्वतन्त्र नभएको प्रश्न बेलाबेला उठने गरेको छ । यो प्रश्न नेता थापाले पनि उठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाइ भारत र चीनमाथि आँखा लगाएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । यो बिषयमा आफनो पार्टीमा भैरहने छलफलले पनि यही निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछन् ।
मुलुक बिषय परिस्थितिमा पुगेकाबेला पनि पार्टीमा यथेष्ट छलफल हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । पार्टीका केही नेताहरुले आफू खुशी निर्णय गर्ने र सोही आधारमा पार्टी र सरकार चलाउँदा समस्यामाथि समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम, प्र्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले जति बोल्दा पनि सच्चिने अवस्था नदेखिएको उनको गुनासो छ ।
नेकपा पार्टीको एकता प्रक्रिया अझै टुंगीन बाँकी रहेकाले यस्तै विवाद कायम रहे यसले थप समस्या निम्तिनसक्ने थापाको आशंका छ ।
उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले लक्ष्यअनुसार सही बाटो लिन नसक्दा बिभिन्न शक्तिहरु सक्रिय भैरहेकाले गणतन्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने स्थिति आएको छ । ’
मणि थापा नेकपा स्थायी कमिटी